Foko sy Fiaviana · Novambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Foko sy Fiaviana · Novambra, 2011
Tantara mikasika ny Foko sy Fiaviana tamin'ny Novambra, 2011
Eoropa Andrefana 26 Novambra 2011
Fiteny 09 Novambra 2011
We also look forward to the 11 Eleven Project on 11/11/11.Ao anatin'ity famoahana Podcast an'ny Global Voices ity isika dia hiresaka ireo teny izay sarotra tadiavina eo anivon'ny aterineto. Teny iray saro-tadiavina eto amin'ny aterineto ve no teneninao? Avy aminà faritra iray izay tsy ampiasàna betsaka ny tenin-dreninao ve ianao? Ankoatra izany dia mety ho isan'ireo olona maro manerana ny tany izay miteny sy manoratra ireo "teny zara raha misy mahalàla" ianao. Miandrandra mafy ny tetikasa 11 Eleven amin'ny11/11/11 ihany koa isika